Isku-shaandheyn lagu sameeyay Gollaha Wasiiradda Somaliland
HARGEYSA, Somaliland - Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa isku shaandheyn ku sameeyay Gollahiisa Wasiiradda, sida ku xusan wareegto kasoo baxday maanta xafiiskiisa.
Isku-shaandheyntan oo ah Xilka qaadis, bedel iyo Magacaabid ayaa saameysay xilalka wasiiro dhowr ah, oo boosaskoodii loo magacaabey shaqsiyaad cusub.
Wareegtada Madaxweynaha Somaliland:
Sida aad la socoto, xilka ayey sunnihiisa tahay in uu meerto noqdo, oo loo dhiibo hadba ciddii hannan karta. Sidaa darteed, waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan kaa qaado xilkii aad haysay ee Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqo-galinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska.
2) In Mubaarak Cabdillaahi Ibraahin, laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorshaynta iyo Horumarinta.
UN: Nidaamka doorashooyinka Somaliland waa in la aamini karo
Somaliland 28.07.2019. 16:02
Wakiilka Qaramada Midoobay ayaa digniin u diray maamulka Hargeysa kahor coddeynta lagu heshiiyay.